Azia Atsinanana · Novambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsinanana · Novambra, 2012
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana tamin'ny Novambra, 2012
Shina30 Novambra 2012
Japana29 Novambra 2012
Shina29 Novambra 2012
Malezia28 Novambra 2012
Olona 70 no nandray anjara tamin'ny fiandohan'ny ‘Diabe Maitso’ tao Malezia tamin'ny 13 Novambra tao Kuantan. Taorian'ny diabe 13 andro sy 300 kilometatra nanavatsava ny firenena, nifarana tao an-drenivohitry ny firenena ny diabe izay olona maherin'ny 15.000 no nandray anjara sy nanohana tamin'izany. Ny vondrona Himpunan Hijau no nikarakara ny ‘diabe lavitr'ezaka’ ho fanoherana...
Korea Atsimo27 Novambra 2012
Miaraka amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena hatao afaka iray volana, hagagàna ny an'ireo Koreana Tatsimo nony niala an-daharana tampoka tamin'ilay hazakazaka ilay lohalaharana amin'ny fandaharana an'ireo mpirotsaka ho fidiana. Ity hetsika ara-politka tsy mbola nisy toa azy ity dia ilay Koreana Tatsimo mpandraharaha mamim-bahoaka lasa nanao politika no nanao azy,...
Na dia Eo Aza Ny Mpitarika Vaovao, Mbola Marefo ny Hoavin'i Shina
Shina26 Novambra 2012
Nandritra ny herinandro no nanatontosàna ny faha-18 ny Kongresy Nasionalin'ny Antoko Komonista Sinoa ary nifarana tamin'ny 14 Novambra 2012 teo. Taranaka mpitarika vaovao, izay tarihin'i Xi Jinping sy Li Keqiang, no nisolo toerana ny ekipa mpitarika teo aloha izay notarihin'i Hu Jintao sy Wen Jiabao. Raha tonga teo amin'ny fahefana i Hu sy Wen folo taona lasa izay, nihevitra...
Thailandy25 Novambra 2012
Nivadika ho herisetra ny famoriam-bahoaka nokarakarain'ny tambajotra Pitak Siam ho fanoherana ny governemanta, na ny "Arovy i Thailand" satria nifandona tamin'ny polisy ireo mpanao fihetsiketsehana tao Bangkok2. Nitifitra entona mandatsa-dranomaso ny polisy mba hanaparitahana ireo vahoaka marobe izay nanandrana hiditra faritra mena. Nangatahan'ireo mpanao fihetsiketsehana ny hialàn'ny Praiminisitra izay ampangain-dry...
Aostralia23 Novambra 2012
Malezia22 Novambra 2012